ဆောင်းပါး | thetpaimyo | Page 2
လက်ရှိဖတ်နေမိတဲ့ စာအုပ် က ဆရာသန်းဝင်းလှိုင် ရေးတဲ့ “ဒေါက်တာဘမော် ၏ နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ” ဆိုတော့ သမိုင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အတွေးတွေပဲ ခေါင်းထဲမှာ စိုးမိုးနေမိတယ်။ကိုကို တို့မူလတန်းကျောင်းသားဘ၀၊အလယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀၊အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀ အားလုံးမှာ သမိုင်း ဘာသာရပ်ကိုသင်ကြရတယ်နော်။မင်း ကို ကိုကို တစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်။ဘာကြောင့် သမိုင်း သင်ယူကြရတာလို့ထင်သလဲ။
ဒီမေးခွန်းအတွက် အဖြေက ကိုကိုတို့အားလုံး သိပြီးသား ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ နာမည်ကျော်စကားတစ်ခွန်းဖြစ်တဲ့“သမိုင်းသင်ရခြင်းသည် မအ အောင်လို့” ဆိုတာပဲပေါ့။ဒီစကားစုလေးက ရိုးရှင်းပေမယ့် အရမ်းကို လေးနက်လွန်းလှပါတယ်။“မအ အောင်လို့” လို့ပြောထားတော့ ဘယ်နေရာတွေမှာ မ အ ရမှာလဲ။အ ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ။ဒါဆိုမအ အောင် ဘယ်လိုလေ့လာရမှာလဲ။ ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲ။ီသမိုင်းဆိုတာ ကကော ကိုကိုတို့ကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုနိုင်မလဲ။
ညီလေး ကို စကားမစပ် တစ်ခုလောက် ကြားဖြတ်ပြောပါရစေ။ဘယ်နေရာမှာမဆို ဘာပဲလုပ်လုပ် “ဘယ်က စလုပ်မလဲ၊ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲ၊ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်မှာလဲ။မျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ရင်ကော ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲ….” ဒီမေးခွန်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရင်ဆုံးပြန်မေးပါဦး။ကိုယ်ကိုကိုယ် ဖြေတတ်အောင်ကြိုးစားပါဦး။ပြီးမှ ဆက်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။သတင်းထောက်ဂျာနယ်လစ်တွေရဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။“ကိုယ်ကိုတိုင် အဖြေမရှိသေးပဲနဲ့ မမေးပါနဲ့” တဲ့။ကိစ္စတစ်ခုမှာ အဖြေဆိုတဲ့ရလဒ်တစ်ခုကို မမျှော်လင့်နိုင်ဘဲနဲ့ ဘယ်လိုခွန်အားတွေနဲ့ ရုန်းကန်ရမှာလဲ။
မအ ရမယ့်နေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ခြုံပြောရင် အသိပညာဗဟုသုတ မှာ မအရဘူးပေါ့ကွာ။ဒါပေမယ့် ဓာတုဗေဒပညာရှင်တစ်ယောက်က ပထ၀ီ ကို နားလည်ချင်မှလည်လိမ့်မယ်၊ညံ့ချင် ညံ့နေမှာပေါ့။သူရဲ့နယ်ပယ် က ဓာတုဗေဒလေ။ဒီတော့ မ အအောင်ကြိုးစားရမယ့် အပိုင်းတွေက ကိုယ့်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အရာပါ။ဘယ်နေရာမှာမဆို ဗဟုသုတကြွယ်ဝနေရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာ။ဒါပေမယ့် ဟိုစပ်စပ်၊ဒီစပ်စပ် ဗဟုသုတကြွယ်နေရင်တော့ ဟိုနေရာလည်း သုံးမရ၊ဒီနေရာလည်း သုံးမရ … ဒီလူရဲ့အနာဂါတ်က ရေရာပါ့မလား။ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ဖို့ မရှိမဖြစ်မသိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အခြေခံဗဟုသုတအနေနဲ့တော့ မ အ အောင် သင်ယူဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒီအတွက် နိုင်ငံသားတိုင်းတစ်ယောက်မကျန် မ အ သင့်တဲ့နေရာကတော့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ပါ။ကြားဖူးနေကြစကားလုံး ဖြစ်ပေမယ့် လက်တွေ့အကောင်အထည်မပြနိုင်ကြပါဘူး။ကိုကိုတို့မှာသာ အမျိုးချစ်တဲ့ စိတ်ဓါတ် ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုကိုတို့နိုင်ငံထဲမှာ ဘယ်တိုင်းတပါးသားမှ လာပြီးခြယ်လှယ်စရာမလိုဘူး။ဒီလိုအမျိုး ကို ချစ်တတ်ဖို့အတွက်ကလည်း ကိုယ့်အမျိုး ဘယ်သူဆိုတာ သိအုန်းမှလေ။ဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေ…သေသေချာချာသိထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုပဲတန်ဖိုးထားမှာပါ။ နိုင်ငံတစ်ခုကို တန်ဖိုးထားချစ်မြတ်နိုးဖို့ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံအကြောင်း စေ့စေ့စုံစုံသိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုသိဖို့အတွက် သမိုင်း ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုက မင်းကို အထောက်အကူပြုမှာပါ။ဒါကြောင့် မင်းရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် မ အ အောင်လို့ သမိုင်းဖတ်ပါ။သင်ပါ။လေ့လာပါ။စူးစမ်းပါ လို့ ကိုကိုတိုက်တွန်းပါရစေ။
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု မှာလည်း ကိုကိုတို့ အ လို့မရဘူး ညီလေး။ကိုကိုတို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ ပုဂံခေတ်ကတည်းက အလွန်တရာမှ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့လှတဲ့ ထေရ၀ါဒဗုဒသာသနာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ပါ။ကိုကိုတို့မှာ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု ရှိတယ်။ကိုယ်ပိုင်စာပေ ရှိတယ်။ကိုယ်ပိုင်အနုပညာရှိတယ်။ဒီစာပေ၊ယဉ်ကျေးမှု၊အနုပညာ တွေကို ကိုကိုတို့မှ မထိန်းသိမ်းနိုင်ရင် နောက်ဖြစ်လာမည့်သမိုင်း ရိုင်းဖို့မပြောနဲ့ ရှိဖို့တောင်မသေချာတော့ပါဘူး။ကိုကိုတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေက အဖိုးတန်အမွေအနှစ်တွေကို သမိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တယ်။ကိုကိုတို့ခေတ်အချိန်ရောက်မှ နောက်မျိုးဆက် ကို မြန်မာ့အမွေအနှစ်တွေ လက်ကမ်းမပေးနိုင်ရင် ကိုကိုတို့​ အ လို့ပေါ့။ကိုကိုတို့ ညံ့လို့ပေါ့။
အချိန်ကာလအရ နည်းပညာခေတ်ဖြစ်နေတော့ ရှေးတုန်းက ပရပိုက်၊ပေစာတွေနဲ့ ရေးခဲ့ရပေမယ့် အခုချိန်မှာ လက်တော့၊ကွန်ပျူတာတွေ နဲ့ ရေးနေရပြီ။လှည်းယာဉ်နဲ့ အချိန်ကြာသွားရတဲ့ခရီးကို မော်တော်ယာဉ်၊လေယာဉ်တွေနဲ့ ခဏလေးရောက်နိုင်တော့မယ်။ဒီလို တိုးတက်ပြောင်းလဲနေမှုတွေနဲ့အညီ လိုက်ရောညီထွေဖြစ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။ဒါပေမယ့် တစ်ချို့က ယဉ်ကျေးမှုကို တိုးတက်မှု နဲ့ရောထွေးပစ်လိုက်ကြတယ် ညီလေးရ။ကိုကို့အနေနဲ့ ဟိုးခေတ်တုန်းကလို တောင်ရှည် သျှောင်တစောင်း ထိုင်မသိမ်း ၀တ်နေရမယ်လို့ မဆိုလိုပေမယ့် တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်အရဆိုပြီး ယဉ်ကျေးမှုကို ဘီကနီစွပ်ပေးတာမျိုးတော့ ကိုကို လက်မခံနိုင်ဘူး။နိုင်ငံတကာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နေရတဲ့အခြေအနေ ကို နားလည်ပေးနိုင်ပေမယ့် မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်မှာတွေတောင် ကြည့်မကောင်းလောက်တဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုးတွေ မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ဒါတွေက ဖြစ်နေရခြင်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနေပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဘာမှန်းမသိနိုင်လောက်အောင် အ နေကြလို့ပါ။နိုင်ငံခြားအငွေ့အသက်တွေ ဖုံးလွှမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံး ကိုတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို တန်ဖိုးထားပေးဖို့ တိုက်တွန်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ကိုကိုတို့မင်းတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာတော့ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု ကိုတန်ဖိုးထားစေချင်တဲ့စိတ်လေး အနည်းအများဝင်သွားဖို့တော့ ကြိုးစားကြည့်ကြရမှာပေါ့။
သမိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ညီလေး ကိုအများကြီးပြောပြချင်မိပေမယ့် မနိုင်ဝန်ထမ်းသလိုမျိုးဖြစ်မှာကိုတော့ စိုးရိမ်နေမိတယ်။သမိုင်း ဆိုတာ ကျယ့်ပြန့်၊ရှုပ်ထွေးသလောက် သိမ်မွေ့လွန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပေါ့။အတိတ်အချိန်ကာလတစ်ခုရဲ့အမှားကိုနောင်တအနေနဲ့ သင်ခန်းစာယူနိုင်မှ အနာကိုကို သိသလောက်၊ကိုကို လေ့လာထားသလောက်အနေနဲ့ပဲသမိုင်းကို ဘယ်လိုအသုံးချသင့်တယ်။သမိုင်းက ဘယ်လိုအကျိုးပြုတယ် ဆိုတာတွေကို မင်းကို မျှဝေပေးနိုင်မှာ။ကိုကိုပြောတာတွေထက် ပိုထိရောက်တာကတော့ ကိုယ်တိုင်သမိုင်းစာအုပ်တွေဖတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ညီလေး အနေနဲ့ ကိုကို ပြောသလောက်ပဲလိုက်တွေးစရာမလိုပါဘူး။ညီလေးရဲ့ပင်ကိုအရည်အချင်းနဲ့ပဲ တွေးကြည့်ပါ။ဒေါက်တာသန်းထွန်းတို့၊ဒေါက်တာမတင်ဝင်းတို့၊ဆရာမောင်သွေးချွန် တို့ရေးတဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေ များများဖတ်ကြည့်။လောလောဆယ် အဲဒီလိုမဖတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တောင် သင်ခဲ့ရတဲ့သမိုင်းစာအုပ်တွေကို ၀တ္ထုဖတ်သလိုမျိုး ပြန်ဖတ်။မင်းအတွက် တစ်ခုခုထူးလာလိမ့်မယ်လို့​ ကိုကို အာမခံတယ်။ညီလေးရဲ့အမြင်တွေကိုလည်း ကိုကို့ကို ပြန်ပြောပြလေ။
ညီလေး အနေနဲ့ သမိုင်းရဲ့တန်ဖိုး ကို နားလည်နိုင်ပါစေ….
1 Comment Posted in ဆောင်းပါး
ကိုမင်းကံစီရေ….ရုတ်တရပ်ပေါ်လာတဲ့ အတွေးကို ပျောက်မသွားခင် ကောက်ရေးထားလိုက်မိတယ်။စာရေးတယ် ဆိုတာလည်း လွယ်မလိုနဲ့အခက်သားဗျ။မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက် မြန်မာစာရေးတတ်၊ဖတ်တတ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုသာမာန်ချရေးတတ်တာမျိုးက မသိစိတ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျ။စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ခံစားချက်ကို လက်က သရုပ်ဖော်ပေးတဲ့သဘောပဲ။ဦးနှောက်ကို အားစိတ်သုံးရတာမျိုးမရှိဘူး။ကလေးဘ၀တည်းက သင်ခဲ့ရတဲ့ သင်ခန်းစာအခြေခံ ဆိုတာအတွက်တော့ ဦးနှောက် နည်းနည်းလိုတာပေါ့နော်။ဒါပေမယ့်​ သာမာန်စာ၊တစ်ပုဒ်၊တစ်ပိုဒ် ကိုချရေးတဲ့အချိန်မှာ မသိစိတ်ကပဲ ဦးနှောက်ထဲမှာရှိပြီးသား အခြေခံသင်ခန်းစာတွေနဲ့ညှိ၊ဒါ ဘယ်လိုရေး၊ပုဒ်မ ဒီနားချ၊ပုဒ်ထီး ဟိုနားချ အဲဒီလိုမျိုး ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားတယ်လို့ထင်တယ်။ဦးနှောက် ကို အပြည့်အ၀သုံးရတဲ့စာမျိုးဆိုတာကိုတော့ ပညာရှင် အဆင့် စာတမ်း၊ဆောင်းပါး တွေမျိုး။ဥပမာ ဗျာ..သမိုင်းတစ်ခု၊ပထ၀ီတစ်ခု ကို စာရေးနေပြီဆိုရင် ကိုယ် ခံစားချက်ကြီးပဲချရေးလို့မရတော့ဘူး။အချက်အလက်၊အကြောင်းအရာ တွေအတွက် အချိန်ပေးရတော့မယ်။ဒီအတွက် ဦးနှောက်လိုတယ်။ကျွန်တော်ဆိုဗျာ စာတစ်ပုဒ်မပြီးသေးပဲနဲ့ ရပ်ထားခဲ့ရင် နောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြန်ရေးဖို့ပြင်ကြည့်၊လုံးဝမရတော့ဘူး။ဘယ်လိုမှ ဆက်ရေးလို့မရတော့ဘူး။အဲသလိုနဲ့ ၇ပ်ထားခဲ့ရတဲ့စာတွေလည်း မနည်းတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့် ဦးနှောက်က ပညာရှင်အဆင့် ထိလက်မခံနိုင်သေးဘူးလေ။ဒီအတွေး ကို ခဏရပ်ပြီး ဟိုအတွေးဘက်ပြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့ ပုံစံမျိုး လိုက်မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ကျွန်တော့် အထင်တွေ ပြောနေတာနော်။မှန်ချင်မှလည်း မှန်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုံစံကို ကျွန်တော် ပြန်ကြည့်ပြီး ပြောနေတာပါ။
ကိုမင်းကံစီ နဲ့ ကျွန်တော် တစ်ခါက ဆွေးနွေးဖူးတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအနေအထား ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောကြရင်း ကိုမင်းကံစီ သုံးသပ်ပြတာတွေကို နားထောင်ရင်း ကျွန်တော် ပြောလိုက်မိတယ်။“အများကြီးမတော်ရင် နေပါစေဗျာ။ခင်ဗျား အခုသုံးသပ်နိုင်သလို အဆင့်မျိုးရရင် ကျေနပ်ပါပြီ” လို့။ခင်ဗျားက ပြန်ပြောတယ်။“ဟေ့…မောင်ပိုင် ရ။မင်းအသက် အခု (၁၇) ၊ ငါ့အသက် အခု (၂၁) မင်းထက်ငါ အနည်းဆုံး ငါးနှစ်လောက် အရင်စောပြီး စာအုပ်တွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ရတာ။(မှတ်ချက်။ အသက် များကို တရားသေမမှတ်စေလို။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုမင်းကံစီ ကိုမေးတိုင်း သူ့အသက် ၁၈ နှစ်ထပ် ပိုဖြေသည်ကို တစ်ခါမှမကြားဘူး 🙂 )မင်းအနေနဲ့ ငါ့ဆီမှာ အခုရှိနေတဲ့ အမြင်မျိုး မရလို့​စိတ်မပျက်ပါနဲ့။မင်းအနေနဲ့ အခုချိန်မှာ ငါ့ကိုလိုက်မှီချင်တယ်ဆိုရင် ၅ နှစ်စာ ငါဖတ်ခဲ့တဲ့စာတွေ ကို မှီအောင်လိုက်ဖတ်နိုင်မှရမယ်။အဲဒီအချိန်မှာ ငါလည်းပဲ စာဖတ်ရပ်ချင်မှရပ်မှာလေ။အဲဒါဆိုတော့ ငါ တစ်နေ့ ၁ အုပ်ဖတ်ရင် မင်းက ၅ အုပ်လောက် လိုက်ဖတ်နိုင်နေရမယ်။”
ခင်ဗျား ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောက ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ပမာဏ၊အဲဒီစာအုပ်တွေက ရတဲ့အတွေးအခေါ်၊အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မူတည်ပြီး ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်စွမ်း၊အကဲခတ်နိုင်စွမ်း၊ဥာဏ်ရည်အဆင့်အတန်း ကွာသွားတယ် ဆိုတဲ့သဘော။ဒါပေမယ့် အဲဒီအယူအဆ ကို ကျွန်တော် လက်မခံနိုင်တော့ဘူးဗျ။စာအုပ် တွေပေါ်မှာချည်းပဲ ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့မရဘူးလို့ ယူဆလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်ရည်၊၀ါသနာ၊စိတ်ဝင်စားရာ၊ကျင်လည်ရာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ ဒါတွေကိုလည်း ထည့်တွက်ရမယ်လေ။ဥာဏ်ရည် ကထားလိုက်ပါ။အရေးမကြီးလို့ ယူဆတယ်။ကျင်လည်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ နဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်လည်း အရင်ပြောမယ်။ဥပမာဗျာ-ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ထပ်အရင် ကွန်ပျူတာပိုင်း ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်၊ထိတွေ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့်​ကျွန်တော် ကျင်လည်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းက နည်းပညာနယ်ပယ်ဆိုရင် ကာလအနည်းငယ်အတွင်း မှာ ခင်ဗျားမသိတာတွေကို ကျွန်တော် ပြန်ရှင်းပြနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နိုင်တယ်။နောက်ပြီး ၀ါသနာ၊စိတ်ဝင်စားရာ။ဒီအချက်တွေက ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာပိုင်းကို စိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုရင် အင်မတန်တော်တဲ့ နည်းပညာနယ်ပယ်က လူတွေနားမှာနေရရင်တောင် ခင်ဗျား လောက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။တကယ်လို့သာ ကျွန်တော်က စက်ပစ္စည်းပိုင်းတွေ ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲဒီအကြောင်းအရာတွေပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေလိုက်ဖတ်တယ်။(အဲဒီ စာအုပ်တွေက ခင်ဗျားဖတ်ဖူးပြီးသား တွေပဲဆိုပါတော့)ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား ဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီး ရတဲ့အတွေးအမြင်နဲ့ ကျွန်တော် ဖတ်ပြီး ရတဲ့အတွေးအမြင် တူမယ်ထင်လား။ကျွန်တော်ကတော့​မတူဘူးလို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ဒီစာအုပ်တွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ပဲဖတ်တယ်။ကျွန်တော် အတွက်ကျတော့ အသိပညာအနေနဲ့ဖတ်တယ်။အဲဒါဆိုတော့ ခင်ဗျား စာအုပ် ၂ အုပ်ဖတ်မှ “အော် ဒါက ဒီလိုပါလား” ဆိုတဲ့နားလည်နိုင်စွမ်း၊အတွေးအခေါ်ကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စာအုပ် ၁ အုပ်ထဲဖတ်ရင်း ရရင် ရသွားနိုင်တယ်လေ။
ကဲ…ဒီလောက်ပဲဗျာ။ကျွန်တော် စာရေးမှု ညံ့ဖျင်းလို့ ပြိုင်ဆိုင်တဲ့ပုံစံ ကို ရေးသလိုမျိုး ဖြစ်နေမလား။ကျွန်တော် အနေနဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခုကို တင်ပြချင်တဲ့သဘောနဲ့ရေးထားတာပါ။ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး အတွေးအခေါ်တွေ၊ဗဟုသုတရှိနေခြင်းက ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ၀ါသနာ၊စိတ်ဝင်စားရာ၊ကျင်လည်ရာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီးတော့လည်း ကွာခြားသွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောချင်တာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
P.S. ကိုမင်းကံစီ…ခင်ဗျား ကော၊ကျုပ်ကော စိတ်ဝင်စားတဲ့ နိုင်ငံရေးမှာဆိုရင်ကော….။အဲလို စိတ်ဝင်စားမှု တူညီနေတဲ့အကြောင်းအရာမှာတော့ စာဖတ်သက် ဆိုတာက အရေးကြီးသွားမယ်ထင်တယ်။ခင်ဗျား အမြင်ကော ပြောပြစမ်းပါဦး။
ချစ်သား ကောင်း အတွက်
မှန်သော သစ္စာ ကြိမ်များစွာနှင့်
ဗုဒ ရှေ့မှာ ဦးခိုက်ခါဖြင့်
ရင်ဝယ်ခိုအောင်း ပဋိသနေ လောင်းတွက်
အမေ့ မှာလှိုက်မော သောကဇောနှင့်
ဒါကို အမေ့သား သိစေချင်ပါသည်။
အမေ့ မှာနင့်မော မေတ္တာဇောဖြင့်
ကြည်လင် မျက်နှာ စုံအင်္ဂါနှင့်
ဒါကို ချစ်သား သိစေချင်ပါသည်။
“ကောင်း” စွာ အရွယ်ရောက်ခဲ့ပြီ။
နှောင်းက ဝေဒနာ ပျောက်ခဲ့ပြီ။
သိ တတ် ပညာ ဖွေရှာရတွင်
“သန့်” ရှင်းကြည်မြ သားဘ၀မှာ
အမေ့ သစ္စာအောက် ဥာဏ်ရောက်တောက်ပြီ။
ပေါ် “လွင်” တောက်ပ စန္ဒာလသို့
ညီလေး ကောင်းသန့်လွင် အတွက် မေမေ ရေးပေးထားတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။
ညီလေးက ဒီနှစ်ဆယ်တန်းဖြေရမှာဆိုတော့ သူ့အခြေအနေ၊သတ်မှတ်ချက်တွေအရ ကျွန်တော့်ထက်ပိုပြီး ဖိအားတွေခံစားနေရချိန်မှာ မေမေကနေ သူ့သားငယ်အတွက် အားပေးစကား ပြောချင်တဲ့ မေတ္တာစကားလုံးတွေကို စာစီကုံးထားတာပါ။
မေမေ ရဲ့ မေတ္တာတွေက ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုနှစ်ယောက်အပေါ်မှာ အချိန်ပြည့်အမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံထားသလိုပါပဲ။ငယ်ငယ်ကတည်းက မေမေကပဲ အမေ့နေရာ၊အဖေ့နေရာကနေ ကျွန်တော်တို့အပေါ် ချစ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီး မေမေ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကြား ဆက်ဆံရေးက ပွင့်လင်းတယ်။နွေးထွေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ညီအကိုတွေ ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်၊ကျောင်းသားတွေဖြစ်နေတုန်းဆိုတော့ ဘယ်လိုစာမေးပွဲပဲဖြေဖြေ မေမေရဲ့ မေတ္တာပို့သံ၊အားပေးသံ ကိုကြားရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုပိုရှိလာတဲ့အထိ မေမေရဲ့စွမ်းအားက ကျွန်တော်တို့ကို စိုးမိုးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
3 Comments Posted in ဆောင်းပါး
ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အမြင် ကို တင်ပြခြင်း။
ယနေ့ (၃၁.၁၀.၂၀၁၂) နေ့မှာ ကျွန်တော် နဲ့ ကိုခွန်နိုင်ပြည့်ထွန်းတို့ ဗ.က.သ ဗဟိုလုပ်ငန်းအမှုဆောင်များ နဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်တည်းနဲ့ စကားပြောခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားပြုခဲ့တာဟာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုက်ဘာစီးတီး) တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အနေနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကို စကားဝိုင်းမှာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့သမျှ ပြန်တင်ပြပါရစေ။
ကျွန်တော် ဒီလိုရေးသားတာက ဥက္ကဌ ကိုခွန်နိုင်ပြည့်ထွန်းနဲ့တိုင်ပင်ခြင်း မရှိဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ရေးတာပါ။ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခုလို ကျောင်းပိတ်ရက်ကာလအတွင်းမှာ နေရာဒေသမတူညီပဲနေ နေရတဲ့အချိန်တွင်းမှာလည်း သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေ စုစုစည်းစည်းရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်စေချင်ပါတယ်။နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထဲနဲ့ သမဂ္ဂကို ကိုယ်စားပြုခွင့်လည်း မရှိပါဘူး။ကိုယ်စားပြုဖို့လည်း အားလုံးရဲ့ဆန္ဒသဘောပါဖို့ဆိုတာလည်း အဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တာက အလွတ်သဘောဖြစ်ပေမယ့် ဗ.က.သ ရဲ့ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ စကားပြောခဲ့ရတာပါ။သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထဲပဲသိနေလို့မဖြစ်ပါဘူး။အားလုံး သိနေရပါမယ်။ကျောင်းပြန်မဖွင့်မှီ အချိန်ကာလကြား အရေးကိစ္စတစ်ခုခု ကြုံလာခဲ့ရင်……. ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ ကျွန်တော် ဒီစာကို ရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Continue reading →
ချစ်တတ်တဲ့ ငါ့စိတ်ကို ငါ မုန်းတယ်
လွမ်းတတ်တဲ့ ငါ့စိတ်ကို ငါ မုန်းတယ်
ပျော့ညံ့တဲ့ ငါ့စိတ်ကို ငါမုန်းတယ်
ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့ ငါ့စိတ်ကို ငါမုန်းတယ်
ခံစားလွယ်တဲ့ ငါ့စိတ် ကို ငါမုန်းတယ်
တစ်ခါတစ်လေကျရင် အသက်ရှင်နေရခြင်း ကိုလည်း ငါ မုန်းချင်တယ်
တစ်ခါတစ်လေကျရင် ပေးဆပ်နေရခြင်းတွေကိုလည်း ငါမုန်းချင်တယ်
တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန် လျှောက်ခဲ့ရတဲ့လမ်းမပေါ်က ပြုံးပြနှုတ်ဆက်တဲ့သူတွေကိုလည်း ငါ မုန်းချင်တယ်ကွာ… Continue reading →